“ချစ်သူများနေ့မှာ အမေဖြစ်သူကို ပြုစုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ လူပျိုကြီးခန့်စည်သူ” – Cele Gabar
ခန်စည်သူကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်လောက်ကတည်းက အောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ။ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်ကို ပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကိုရရှိထားတဲ့ သူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်အထိကို အနုပညာအလုပ်တွေကိုသာ ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ခန့်စည်သူကတော့ ဒီနေ့မှာကျရောက်တဲ့ ချစ်သူများနေ့မှာတော့ လူပျိုကြီးပီပီအမေဖြစ်သူကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရင်းနဲ့ ဒီနေ့တစ်နေ့တာကို ဖြတ်သန်းနေခဲ့ပါတယ်။ လူပျိုကြီးခန့်စည်သူကတော့ “ခန္ဓာရှိရင်ဝေဒနာရှိမယ်။ မပျောက်ကင်းနိုင်ပေမယ့်၊ တရားအသိနဲ့ ခံစားနေရသော ဝေဒနာများမှ အမြန်ဆုံးသက်သာပါစေမေမေ။”ဆိုပြီးတော့လည်း မိခင်ဖြစ်သူ အမြန်ဆုံးပြန်လည်ကျန်းမာလာစေဖို့ကို ဆုတောင်းထားပါသေးတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ လူပျိုကြီးခန့်စည်သူကတော့ ဒီနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၄)ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ ချစ်သူများနေ့မှာ တစ်နေ့တာကို အမေကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရင်းဖြတ်သန်းနေပါတယ်နော်။ CeleGabar ပရိသတ်ကြီးတွေကရော ဒီနေ့တစ်နေ့တာကို ဘယ်လိုတွေဖြတ်သန်းသွားမလဲဆိုတာ ဖြေပေးသွားခဲ့ပါဦး…ပရိသတ်ကြီးရေ….
“ခ်စ္သူမ်ားေန႕မွာ အေမျဖစ္သူကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့ လူပ်ိဳႀကီးခန္႕စည္သူ”
ခန္စည္သူကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ေလာက္ကတည္းက ေအာင္ျမင္မႈေတြရရွိေနတဲ့ အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ပါ။က်ရာဇာတ္႐ုပ္တိုင္ကို ပီျပင္ေအာင္သ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္တာေၾကာင့္လည္း ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးခ်စ္ခင္မႈကိုရရွိထားတဲ့ သူတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။လက္ရွိအခ်ိန္အထိကို အႏုပညာအလုပ္ေတြကိုသာ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ခန္႕စည္သူကေတာ့ ဒီေန႕မွာက်ေရာက္တဲ့ ခ်စ္သူမ်ားေန႕မွာေတာ့ လူပ်ိဳႀကီးပီပီအေမျဖစ္သူကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရင္းနဲ႕ ဒီေန႕တစ္ေန႕တာကို ျဖတ္သန္းေနခဲ့ပါတယ္။ လူပ်ိဳႀကီးခန္႕စည္သူကေတာ့ “ခႏၶာရွိရင္ေဝဒနာရွိမယ္။ မေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ေပမယ့္၊ တရားအသိနဲ႔ ခံစားေနရေသာ ေဝဒနာမ်ားမွ အျမန္ဆုံးသက္သာပါေစေမေမ။”ဆိုၿပီးေတာ့လည္း မိခင္ျဖစ္သူ အျမန္ဆံုးျပန္လည္က်န္းမာလာေစဖို႕ကို ဆုေတာင္းထားပါေသးတယ္။
ပရိသတ္ႀကီးေရ လူပ်ိဳႀကီးခန္႕စည္သူကေတာ့ ဒီေန႕ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၄)ရက္ေန႕မွာ က်ေရာက္တဲ့ ခ်စ္သူမ်ားေန႕မွာ တစ္ေန႕တာကို အေမကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရင္းျဖတ္သန္းေနပါတယ္ေနာ္။ CeleGabar ပရိသတ္ႀကီးေတြကေရာ ဒီေန႕တစ္ေန႕တာကို ဘယ္လိုေတြျဖတ္သန္းသြားမလဲဆိုတာ ေျဖေပးသြားခဲ့ပါဦး…ပရိသတ္ႀကီးေရ….
“အိပ်မက်ကြီးတွေထဲက အိပ်မက်တစ်ခုကို အကောင်အထည်ဖော်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ သုတအောင်”
နယ်သာလန်သံရုံးမှချီးမြှင့်တဲ့ &PROUD သူရဲကောင်းဆုရရှိသွားတဲ့ ဆွေဇင်ထက်
အားပေးကြတဲ့ချစ်ပရိသတ်တွေကြောင့် ပျော်ရွှင်ကြည်းနူးနေရတဲ့ မင်းသားချောဘုန်းရှိန်ခန့်
“ညီထွဠ်ခေါင်နဲ့ ကျော်ကျော်တို့ရဲ့ လိုက်ဖက်လွန်းတဲ့ စုံတွဲပုံတွေကို ချပြလိုက်တဲ့ ဆုမြတ်နိုးဦး”
“ကင်းထောက်ဝတ်စုံလေးနဲ့ လိုက်ဖက်ညီစွာလှပနေတဲ့ အေးမြဖြူ”